ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် စတီးလက်ရန်းအသစ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လျှောက်လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း? - Yangon Media Group
ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် စတီးလက်ရန်းအသစ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် လျှောက်လမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း?
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၆- မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်း ၆၆ လမ်း၊ ၁၂ လမ်းမှ ၂၆ လမ်းအထိ သံ ပန်းများအား စတီးလက်ရန်းအသစ် တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လျှောက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဇူလိုင် ဒုတိယပတ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မ တီမှ သိရသည်။
”အရှေ့ကျုံးလမ်း ၆၆ လမ်း နဲ့ ၁၂ လမ်းကနေ ၂၆ လမ်းအထိ ကျုံးဘေးပလက်ဖောင်းနဲ့ လက် ရန်းအသစ်တပ်ဆင်နိုင်ရေးကွင်း ဆင်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်။ လာမယ့်အ ပတ်မှာ လုပ်ငန်းစတင်မှာပါ။ အ လှူရှင်ကိုလည်း မြို့ကိုယ်စားကျေး ဇူးတင်ပါတယ်”ဟု မန္တလေးမြို့ တော်ဝန်ဒေါက်တာရဲသွင်က ပြော ကြားသည်။
မန္တလေးမြို့ ကျုံးတောင်ဘက် တွင် သံလက်ရန်းနှင့်လျှောက်လမ်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ခဲ့ပြီး နောက် ယခုအခါ ကျန်ရှိသော ကျုံးအနောက်ခြမ်းနှင့် မြောက်ဘက် ခြမ်းတို့တွင် တပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်နေပြီး မြို့ နေလူထုအား ချပြသွားမည်ဖြစ် ကာ လှူဒါန်းမှုများရှိလာလျှင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
”ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်းပလက် ဖောင်းနဲ့ လက်ရန်းကို ဧဒင်ဦးချစ် ခိုင်က တာဝန်ယူမယ်လို့ပြောတယ်။ သူကသူ့အဖွဲ့နဲ့သူလုပ်မယ်ဆိုတော့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမယ်။ ဘယ် လောက်ကျမယ်ဆိုတာတော့ မသိ ဘူး။ ကျန်တဲ့သံပန်းလက်ရန်းတွေ ကို ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတာ တွက်ချက်နေတယ်။ ကျန်ရှိနေသေး တဲ့လက်ရန်း၊ လျှောက်လမ်းတွေကို ပြုပြင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကော်မတီက ဆက်လုပ်ချင်ပေမယ့် ဘတ်ဂျက်ကို ကြိုတင်လျာထား တွက်ချက် ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်လို့ ချက်ချင်းလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေ တယ်”ဟု မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီဝင်ဦးကျော် ဆန်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် စ တီးလက်ရန်းအကာအရံတပ်ဆင် ခြင်းနှင့် လျှောက်လမ်းများအဆင့် မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအစအဆုံး အား စည်ပင်သာယာ၏ ဒီဇိုင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကာ အချိန် ကာလအားဖြင့် နှစ်လနီးပါးကြာ မြင့်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ကျုံးတောင်ဘက် ခြမ်းတွင် စတီးလက်ရန်းတပ်ဆင် ခြင်းနှင့်လျှောက်လမ်းများအဆင့် မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မန်းသီတာဥယျာဉ်အတွက် ဘတ်ဂျက် ငွေ ကျပ်သိန်း ၃၄၅ဝ ရရှိခဲ့သော် လည်း ယင်းဥယျာဉ်ကို အလယ် ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က လုပ် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ယင်းဘတ်ဂျက်များကို အသုံးပြု၍ ကျုံးတောင်ဘက်ခြမ်းကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ်လအတွင်းက ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဧပြီလတွင် အပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှ ဝယ်ယူသော မျိုးစေ့များအရည်အသွေးမမီသဖြင့် ရွှေဘိုနှင့်ဒီပဲယင်းမှတောင်သူမျာ
အသည်းနှလုံးပုံ ရိဒ်ရေကန်သို့ ညအိပ် အပန်းဖြေလာရောက်သူများ အဆင်ပြေစေရန် တည်းခိုဆောင်များ အဆ
ချင်းတောင်ပေါ်တွင် ကော်ဖီပင် သိန်းချီ နှစ်စဉ် စိုက်ပျိုးသွားနိုင်ရန် ကော်ဖီပျိုးပင် တစ်သိ??
အဆိုတော် G-Dragon နှင့် မင်းသမီး လီဂျူယောင်းတို့၏ အချစ်ရေး ကောလာဟလသတင်း အွန်လိုင်းတွင် ပျံ့နှံ့
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ ဇီးအုပ်ကွက်သစ်၌ လေပြင်းတိုက်ခတ်၊ နေအိမ် ၁ဝဝ ကျော်ပြိုလဲ၊ အမျိုးသမီး
မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသော ပွာတိုရီကိုနိုင်ငံသို့ သမ္မတထရန့်က ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများ တင်ပို့